राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट खेल्ने सपना छः अर्जुन कुमाल (अन्तर्वार्ता)
राजधानीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगीतामा गण्डकी प्रदेश बाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका १४ वर्षीय किशोर खेलाडी अर्जुन कुमालको चर्चा अहिले चौर्फीक चलेको छ ।
३ खेल मा ११६ रन बनाएका उनलाइ धेरैले नेपाली क्रिकेट को भविष्यको ठूलो स्टार को रुपमा हेर्न थालिसकेका छ्न । यसै सन्र्दभमा रहेर गुल्मी अपडेट कर्मी अनिल जिसीले उनि संग केही कुराकानी गरेका छन् ।
-सुरुमा ब्यक्तिगत कुरा बाट जाउ , तपाईंको खास घर गुल्मी भन्ने कुरा सुनियो खास कुरा के हो ?
हो मेरो परिवार गुल्मीको हो , मेरो हजुरबुबा हजुरआमा अहिले पनि उतै गुल्मी मै बस्नु हुन्छ तर मेरो आफ्नो परिबार अहिले भारत को नया दिल्लीमा बस्छ । मेरो पापा मम्मी आज भन्दा २४ बर्ष अगाडी गुल्मी बाट काम गर्न भारत जानू भएको हो रे , अनि मेरो जन्म पनि उतै भारत मै भएको हो।
-तपाईंको बाबा ले नयाँ दिल्लीमा के काम गर्नु हुन्छ ?
मेरो पापा ले नयाँ दिल्लीमा चस्मा फ्याक्ट्री मा काम गर्नु हुन्छ पापा ले त्यहा काम गर्न थालेको २० साल भन्दा बढी भयो रे उता सबै कुरा राम्रो छ त्यसैले यत्रो साल देखि मेरो परिबार उतै बसिरहेको छ।
-तपाईं भर्खरै १४ बर्ष को हुनु भयो तर नेपाल आएर रास्ट्रीय स्तर को क्रिकेट खेलिरहनु भएको छ, क्रिकेट खेल्न लागेको कति वर्ष भयो ?
मेरो जन्म उतै भारत मै भएको हुनाले सानो उमेर देखि नै क्रिकेट लाई नजिक बाट बुझ्ने मौका पाए । मेरो पापा पनि क्रीकेट को ठुलो फ्यान हो उहाले टि भि मा सधै क्रीकेट खेल हेर्नुहुन्थ्यो त्यहा बाट नै मेरो क्रीकेट मा रुचि बढ्न थालेको हो अनि म ७ बर्ष को भए पछि मेरो पापा ले मलाइ दिल्ली कै एउटा क्रिकेट एकेडेमी मा भर्ती गराउनु भएको हो , म सात बर्ष देखि त्यही क्रिकेट एकेडेमी मा क्रिकेट र पढाइ संगसंगै गरिरहेको छु।
-यो प्रतियोगितामा तपाईंको ब्याटिङ गर्ने शैली बाट धेरै जना प्रभावित भैरहेका छ्न, यो ३ खेल मा रन पनि राम्रै हानिरहनु भएको छ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?
बाहिर भएको चर्चा खासै थाहा छैन म फेसबूक नि चलाउदिन त्यो भएर पनि होला तर भेटेको सबै जनाले राम्रो खेलिस अझै राम्रो गर्नु भन्नू हुन्छ त्यो सुन्दा खुसी लाग्छ मेरो गण्डकी प्रदेश टिम को दाइ हरुले नि हौसला दिनुहुन्छ यो सबै सुन्दा धेरै खुसी लाग्छ , अझ राम्रो गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईंको ब्याटिङ गर्ने तरिका बिल्कुल फरक छ , धेरै बल हरु डिफेन्स गरेर खेल्नु हुन्छ टेस्ट क्रिकेट मा जस्तो , तपाईंको ब्याटिङ शैली नै यस्तै हो कि यो प्रतियोगिता मा यस्तो भएको हो रुरु
होइन म पहिला देखि नै यस्तै तरिका ले खेल्ने गर्थे , जब म ब्याटिङ गर्न कृज मा जान्छु मेरो पहिलो उदेश्य भनेको जति सक्यो बढी समय कृज मा बिताउने भन्ने हुन्छ , म कति रन बनाउने भन्दा पनि कति समय सम्म खेल्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छु किनकी अहिले मलाइ जति सक्यो धेरै अनुभव को खाचो रहेको छ ।
-जतिसक्दो कृज मा टिकेर खेल्ने भन्नू भयो , कुनै अरु ठूलो खेलाडी हरु बाट प्रभावित भएर यस्तो शैली अपनाउनु भएको कि अरु केही हो ?
मेरो आइडल प्लएर भारत का सचिन तेन्दुल्कर हुन, मेरो पापा पनि सचिन को जबर्जस्त फ्यान हुनुहुन्थ्यो । म उहाको ब्याटिङ बाट निकै प्रभावित छु । मैले क्रिकेट राम्रो संग बुझ्ने बेला त उहाले सन्यास लिने बेला भएको थियो खासै खेल हेर्न पाएन तर अहिले पनि युट्युब मा उहाको ब्याटिङ गर्ने तरिका हेरिरहेको हुन्छु , त्यसबाट पनि धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ ,
-अहिले चाहिँ तपाईंको को आइडल खेलाडी को हो ?
मलाइ अहिले को क्रिकेटर मा सबैभन्दा मन पर्ने खेलाडी भारत का बिराट कोहोली र न्युजिल्यान्ड का केन विलियम्सन हुन । उहाँ हरुको ब्याटिङ हेर्न निकै मज्जा लाग्छ । केन विलियम्सन को डिफेन्स गर्ने तरिका र बिराट कोहोली को एट्याक गर्ने तरिका धेरै मन पर्छ । उहाँ हरुको ब्याटिङ हेर्दा धेरै कुरा सिक्न पनि पाइन्छ जस्तो लाग्छ । उहाँ हरुको ब्याटिङ लाइभ हेर्न नपाए युट्युब मा गएर भए पनि नछुटाइ हेर्छु ।
-कुनैपनी खेल खेलिसकेपछी आफ्नो रास्ट्रीय टिम बाट खेलौ भन्ने सपना त जसको पनि हुन्छ , पक्कै तपाईंको पनि होला त्यो बारेमा के सोचिरहनु भएको छ , तपाईंको भबिस्य को प्लान के छ ?
हरेक खेलाडी को सपना हुन्छ आफ्नो देश बाट खेलौ राम्रो गरौ भन्ने मेरो पनि सपना त्यही नै हो , कुनै दिन नेपाल को जर्सी लगाएर देश को लागि खेलौ भन्ने अब हेर्दै जाउ भबिस्य मा के हुन्छ , त्यो समय आउन धेरै बाकी छ जस्तो लाग्छ मैले अझै धेरै कुराहरु सिक्न बाकी नै छ , अहिले त्यता तिर भन्दा नि हरेक खेल मा कसरी बढी भन्दा बढी समय कृज मा बिताउ भन्ने कुरा मा मैले फोकस गरेको छु । आफुले पाएको मौका लाई खेर नफालौ भन्ने मेरो बिचार हो । मेरो अहिलेको मेन टार्गेट नै धेरै अनुभब लिने र नया कुरा सिक्ने मा रहेको छ ।
-अब अन्त्य मा यो प्रधानमन्त्री कप सकिसकेपछी तपाईं नेपाल नै बस्नु हुन्छ कि फेरि भारत नै जानू हुन्छ ?
मलाइ नेपाल बस्ने बारे अहिले सम्म कसैले पनि केही भनेको छैन फेरि उतै दिल्ली नै जान्छु होला , मेरो पढाइ नि उतै छ अनि फेरि क्रिकेट एकेडेमी पनि उतै छ । मेरो मम्मी पनि अहिले नेपाल आउनु भएको छ । उहाँ अहिले गुल्मी मा हुनु हुन्छ
सायद उहाँ र म संगै दिल्ली फर्कन्छौ होला ।